Semalt: सबै भन्दा राम्रो अनलाइन वेब Scrapers के हो?
वेब डाटा स्क्र्यापिंगमा वेबसाइटको नयाँ र अवस्थित डाटालाई लक्षित गर्ने र सजिलो पहुँचको लागि खोजी ईन्जिन डाटाबेसहरूमा यसलाई भण्डारण समावेश गर्दछ। यो सत्य हो कि वेब स्क्र्यापिंग उपकरणहरूले समयको साथ लोकप्रियता प्राप्त गर्दै छ किनकि वेब क्रोलरले स्वचालित र सम्पूर्ण क्रलिw प्रक्रियालाई सरल बनायो जुन वेब डेटा स्रोतहरू सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि पहुँचयोग्य बनाउनका लागि हो। केही वेब क्रोलर उपकरणहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुक्रमणिका बनाउन वा तिनीहरूको साइटहरू वा ब्लगहरूलाई कोडको आवश्यकता बिना नै विधवात्मक र प्रभावकारी तरिकामा अनुमति दिन्छ। तिनीहरू डाटालाई बिभिन्न ढाँचामा रूपान्तरण गर्छन् र प्रयोगकर्ताहरूका आवश्यकताहरू अनुरूप। यहाँ हामीले वेबसाइटहरू र ब्लगहरू स्क्र्याप गर्न केहि उत्कृष्ट वेब क्रलर उपकरणहरूको बारेमा छलफल गरेका छौं।
१. साइटटेक वेबकोपी
साइटेक वेबकोपी एक व्यापक, निःशुल्क डाटा स्क्र्यापिंग प्रोग्राम हो जसले तपाईंलाई तपाईंको हार्ड ड्राइवमा साइट प्रतिलिपि गर्न दिन्छ ताकि तपाईं यसलाई इन्टरनेट जडान बिना पढ्न सक्नुहुनेछ। यस प्रोग्रामले निर्दिष्ट गरिएका वेबसाइटहरू स्क्यान गर्दछ उनीहरूको डाटा वा तपाईंको हार्ड डिस्कमा सामग्री डाउनलोड गर्नु अघि। यसले स्रोतहरूमा लिंक स्वचालित पनि गर्दछ जस्तै छविहरू, वेब पृष्ठहरू, र साइटको स्थानीय सामग्री, र उही वेबसाइटको सेक्सनहरू समावेश गर्दछ जुन सर्च इन्जिनहरूमा कुनै मतलब छैन।
HTTrack एक नि: शुल्क प्रोग्राम हो जुन विभिन्न प्रकारका विकल्पहरू र विकल्पहरू प्रदान गर्दछ इन्टरनेटबाट तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणमा सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्नका लागि उपयुक्त। यसको केहि प्रसिद्ध संस्करणहरू विन्डोज, सन सोलारिस, युनिक्स, र लिनक्स हुन्। यस कार्यक्रमले तपाइँको साइटलाई एक भन्दा बढी पटक ऐना गर्न अनुमति दिन्छ र वेब क्रलिling प्रक्रियालाई सजिलो र छिटो बनाउँदछ। तपाईं छविहरू, फाईलहरू, एचटीएमएल कोडहरू, डाइरेक्टरीहरूमा पहुँच पनि पाउन सक्नुहुनेछ, साथै डाउनलोड कुनै पनि समयमा रोक्नुहोस्।
अक्टोपार्से एक शक्तिशाली, नि: शुल्क वेब क्रॉलर हो जुन तपाईको साइटबाट सबै प्रकारको डेटा निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। यो कार्यक्रमले राम्रो तरिकाले तपाईंको वेबसाइट रिप गर्न केहि विकल्पहरू प्रयोग गर्दछ र लाभ लिनको लागि विस्तृत प्रकार्यहरू छन्। यसका दुई प्रख्यात मोडहरू उन्नत मोड र विजार्ड मोड हुन्, जुन प्रोग्रामरहरूको लागि राम्रो छ कुनै समयको लागि अक्टोपार्सको लागि प्रयोग गर्न। तपाईं यस विस्तृत उपकरण प्रयोग गरेर सेकेन्डमा आफ्नो साइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। थप, तपाईं साइटहरू एक्स्ट्रा, एचटीएमएल, र पाठको रूपमा बिभिन्न सुसंरचित ढाँचाहरूमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
गेटलफ्ट एक प्रयोग गर्न सजिलो प्रोग्राम हो जुन ब्लग वा साइटलाई द्रुत रूपमा फाल्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाइँको सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्दछ र लाभ लिन धेरै विकल्पहरू छन्। तपाईं युआरएल प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फाइलहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम एक उत्तम हो किनकी यो १ different विभिन्न भाषाहरूमा आउँदछ, २//7 समर्थन छ, र तपाइँको ब्राउजि experience अनुभवलाई अद्भुत र उत्कृष्ट बनाउँदछ।
Scraper एक प्रसिद्ध क्रोम एक्सटेन्सन हो कि सीमित डाटा निष्कर्षण गुणहरू छन् तर अनलाइन अनुसन्धान सञ्चालनको लागि मद्दत गर्दछ। यसले तपाईको डेटा गुगल स्प्रिडशिटमा निर्यात गर्दछ तपाईको आफ्नै कम्प्युटरको भन्दा धेरै समय बचत गर्दछ।